“Dhaleeceynta Lukaku waa cadaalad daro” – Berbatov oo difaacay laacibka reer Belgiam, kahor kulanka Everton – Gool FM
“Dhaleeceynta Lukaku waa cadaalad daro” – Berbatov oo difaacay laacibka reer Belgiam, kahor kulanka Everton
(Manchester) 26 Okt 2018. Weeraryahankii hore ee kooxda Manchester United Dimitar Berbatov ayaa aaminsan in Romelu Lukaku uu ka gudbi doono xaalada adag ee goolal la’aanta ah uu ku soo jiray 8-dii kulan ee lasoo dhaafay.
Romelu Lukaku ayaa Axada soo aadan kaga hor imaan doona kooxdiisii hore ee Everton horyaalka Premier League, kadib markii uu kusoo fashilmay in wax gool ah uu soo dhaliyo tan iyo guushii 2-1 ahayd ay Red Divalis kaga soo gaartay Watford bishii September ee lasoo dhaaay.
Inkastoo uusan wax gool ah dhalinin tan iyo bishii September ee lasoo dhaafay, hadana Romelu Lukaku ayaa taageera xoogan ka helayaa macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho iyo Berbatov, kaasoo afar sano ku qaatay Old Trafford kusoo dhaliyay 58 gool.
Berbatov ayaa yiri: “Waan ogahay inuusan wax gool ah dhalinin 8 kulan, laakiin ma filayo in la dhaleeceeyo Lukaku ay tahay cadaalad”.
“Sida uu sheegay Jose Mourinho, wuxuu wax kasta u sameenayaa si ay kooxdiisa u fiicnaato, laakiin waxaa laga yaabaa in xaalada ay ku adkaato”.